CreatingaWeb Page (မြန်မာဘာသာ ဖြင့် )
Adobe: After Effects CS4 Help
ကှနျပွူတာက desktop ပျေါမှာ icon တှပြေောကျနပွေီး ဘာမှလုပျလို့မရလို့ပါ
ကနြော့အသိတဈယောကျကှနျပွူတာမှာ စကျကို ဖှငျ့လိုကျရငျ ၀ငျးဒိုးကပုံမှနျတကျပွီးတော့ desktop ဆီကိုရောကျလာရငျဘာမှမပျေါတော့ပဲ(နောကျခံပုံလေးတော့ပျေါပါတယျ) explorer.exe ကို ဖြောကျထားသလိုမြိုးလေး ဖွဈနတေယျ
သုံးတာက windows XP pro& dell laptop ပါ
ctr+Alt+Del ကို နှိပျပွီးချေါရငျလဲ task-manager က လှဲ ပွီးကနျြတဲ့ lock . log-off.shutdown,cancel ,change password အကုနျလုပျလို့ရပါတယျ
ဘာကီးမှလဲ နှိပျလို့ မရပါ
သူပွောတာကတော့ antivirus program တဈခုကို အငျစတော လုပျရငျးဖွဈသှားတာလို့ပွောတာပဲ
ဘယျလိုပွနျလုပျရမလဲ ဆိုတာကိုလဲ ကူညီကွပါဦး
ဖွဈနတေဲ့ပုံလေးကို ကနြော့စကျ က screen-shoot လေးနဲ့ ပွထားပါတယျ
Recovery Disk နဲ့ Vista ကို Recovery (Reinstall)ပြန်လုပ်နည်း
ကျနော်အခုရေးပြချင်တာက HP, Compaq ကွန်ပျူတာအမျိုးအစားများကို Recovery
Manager ပါရှိသည့်အတွက် ၎င်းကွန်ပျူတာများကို Recovery Partition နဲ့ ပြုလုပ်
ထားတာအတော်များများတွေ့ရတယ်။ အဲဒီလို Recovery Partition နဲ့ လုပ်ထားတဲ့
စက်ကို လိုအပ်လို့ ပြန်ပြီး Recovery လုပ်ရမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေနိုင်အောင် သိသ
ဒါပေမယ့် အခု ၀င်းဒိုးဗစ်စ်တာသုံးတာမ၇ှိသလောက်ဖြစ်သွားပါပြီး ဒါကြောင့် ဒီပို့စ်
Recovery Disk စက်ထဲမှာ ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ Boot တက်လိုက်ပါ။ HP, Com
paq Brand အများဆုံးဟာ Boot တက်လျှင် F10 ကီးနှိပ်ထားရတာများပါတယ်။
Welcome to the Recovery Manager ဘောက်စ်ပေါ်လာမည်။ Advance option ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်ဘောက်စ်တွင် system recovery ကိုနှိပ်ပြီး Next ကိုနှိပ်။
နောက် Insert Recordable Disk ဘောက်စ်ပေါ်လာမည်။ CDဆိုရင်9ချပ်၊ DVD ဆိုရင်
2 ချပ်၊ DVD-DL (DVD Dual Layer) အသုံးပြုတာနည်းပါတယ်။ Next ကိုနှိပ်။
နောက်ဘောက်စ်တွင် Disk 1 of2ဆိုပြီး Recovery Disk က မိမိစက်ကို Reformating
Disk 1 လုပ်ဆောင်ချက်ပြီးလျှင် Disk2ကိုဆက်ထည့်လိုက်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်း…
ဒီအဆင်မှာတော့ system recovery successful ဆိုပြီးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Finish ကိုနှိပ်။
Restart ပြန်တက်လာလျှင် Recovery Disk နဲ့ system recovery လုပ်ဆောင်တာပြီးသွားပါပြီ
( အထက်ပါပုံများသည် Wikihow.com မှာ Recovery Created Disk ကိုမှီငြမ်းထားခြင်းဖြစ်
သည်။ ဒါကြောင့် တစ်ချို့ပုံသည် Recovery လုပ်ထားတဲ့ပုံမဟုတ်ပဲ၊ Created လုပ်ထားတဲ့ပုံ
ဖြစ်ပါသည်။ အထောက်အကူဖြစ်စေရန်သာ ရယူထားဖြစ်သည်။ )
Labels: computer / window
Window Password များကို Trinity Rescue Kit or TRK နဲ့ ဖြုတ်မယ်
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကျနော်ရေးခဲ့တဲ့ Window Password များကို Linux နဲ့ဖြုတ်မယ်
ဆိုတဲ့ တော့ပစ်ကိုဖတ်ပြီး ကွန်မင့်ပြန်ရေးခဲ့ထားပါတယ်။ ကိုလင်းနက်စ်ရေ…၀င်းဒိုးပတ်စ်ဝါဒ်
ဖြုတ်တာ ဒီထက်လွယ်တဲ့နည်းလေးရှိရင် ပို့စ်တင်ပေးစေချင်တယ်တဲ့။ ပတ်စ်ဝါဒ်ဖြုတ်တဲ့နည်း
တွေက အများကြီး တစ်ချို့ကအဆင်ပြေတာလဲရှိသလို မပြေတာလဲအများကြီးပဲ။ အင်တာ
နက်ပေါ်မှာရှာလိုက်ရင် ပတ်စ်ဝါဒ်ဖြုတ်တဲ့ဆော့ဝဲလ်တွေအများကြီး ဒါပေမယ့် တော်တော်
များက Free License မဟုတ်တော့ တကယ်သုံးကြည့်တဲ့အခါ အဆင်မပြေပါဘူး။
နောက်တော့ ကျနော် Linux Lice CD ကို သုံးပြီး ၀င်းဒိုးပတ်စ်ဝါဒ်ကို ဖြုတ်တဲ့နည်းကို စမ်း
သုံးကြည့်တယ်။ သူကျတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူကျတော့ လုပ်ရ ကိုင်ရတာနည်း
ဒါကြောင့် Linux Lice CD နဲ့ဆိုင်ရင် Trinity Rescue Kit or TRK 3.4 ကို အသုံးပြုပြီး ၀င်း
ဒိုးပတ်စ်ဝါဒ်ကို ဖြုတ်တဲ့နည်းက ပိုပြီးလွယ်မယ်ထင်တာနဲ့ သူငယ်များဆီ ထပ်မံမိတ်ဆက်ပေး
လိုက်ပါတယ်။ သူက Free License ဆိုတော့ ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့။
ဒီဆော့ဝဲလ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ Feature တွေကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ….
-5 different virusscan products integrated inasingle uniform commandline with
online update capability
-winclean,autility that cleans up all sorts of unnecessary temporary files on your
-self update capability to include and update all virusscanners + local changes
you made to TRK.
-UTF-8 international character support (select keyboard language from the scrollable
textmenu at startup)
-elaborated documentation, including manpages for all commands (also TRK 's
Trinity Rescue Kit or TRK နဲ့ Window PW ဖြုတ်နည်း….
ဒီဆော့ဝဲလ်က iso image file ဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဗျာ။ iso Brun နည်း တွေသိချင်ရင်
ကျနော့်ဆိုက်မှာပဲ ရှာပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကဲ…Burn လိုက်ပြီးဆိုရင် ၎င်း CD ကို Drive ထဲ
ထည့်ပြီး Boot တက်လိုက်ပေါ့ဗျာ။ Boot တက်လာလျှင် ဒီအတိုင်းပဲ ကြည့်နေလိုက်ပါ။ အောက်
ပါပုံအတိုင်း ရောက်လာရင်… Trinity Rescue Kit easy menu အောက်က Window Passw
Ord Resetting ကိုရွေးပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
နောက် Screen တစ်ခုမှာ Winpass with Prompt for user name first ကိုရွေးပြီး
နောက် Screen တစ်ခုမှာ မိမိဖျက်ချင်တဲ့ ပတ်စ်ဝါဒ်ရဲ့ အကောင့် user name ကိုရိုက်
နောက် screen တွေမှာ ”1" ရိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ Pressakey continue ဆိုတာကို ကီး
တစ်ခုခုကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို Go back ပြန်သွားပြီးထွက်လို့ရပါပြီ။
ဘာဖြစ်သိချင် လိုချင်ရင် စမ်းရတာချည်းပါပဲ။ လက်တွေ့သည်သာ အသေချာဆုံးဖြစ်ပါ
(Oringinal link) Trinity Rescue Kit or TRK 3.4
Labels: software / window
မိမိကွန်ပျူတာကို OS (Operation System) 32 bit /64 bit စစ်ဆေးနည်း
မိမိသုံးတဲ့ကွန်ပျူတာရဲု့ OS (Operation System)ကို 32 bit လား (ဒါမှမဟုတ်) 64 bit လား
သိရှိနိုင်ရန် ရေးလိုက်ဦးမယ်။ သိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များက တိတ်တိတ်လေးပေါ့။ နောက်ပိုင်း စက်
တွေဟာ 64 bit များပါတယ်။ 32 bit ထက် ကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် အချို့application soft
Ware များ သူနဲ့ သိပ်ပြီးအဆင်မပြေလှပါဘူး။ အထူးအားဖြင့် ဇော်ဂျီဖေါင့်၊ ဇော်ဂျီကီးဘုတ်
အင်စတောလာတွေပေါ့ဗျာ။ ခဏခဏ 64 bit တွေနဲ့ conflict ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိမိကွန်ပျူတာကို ၀ယ်ယူတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ် OS (Operation System) type
သုံးမလဲဆိုတာ အရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ ၀ယ်ယူသင့်တယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်။ ဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာ OS (Operation System)ု 32 bit လား (ဒါမှမဟုတ်) 64 bit လား
သိနိုင်အောင် အောက်ပါအချက်အလက်တွေကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်လို့ရပါလိမ့်မယ်။
My Computer > Right Click> Properties ကိုနှိပ်ပါ။ System Properties ဘောက်စ်ပေါ်
လာလိမ့်မယ်။ အဲဒီဘောက်စ်ထဲမှာ System Type: 32 bit Operation System ဆိုပြီးတွေ့
Start> Menu> Run ဒါမှမဟုတ် Window + R ကီးကိုတွဲနှိပ်။ Run ဘောက်စ်တွင် dxdiag
ဆိုပြီး ရိုက်ထည့်။ DirectX Diagnostic Tool ဘောက်စ်ပေါ်လာမည်။ ကွင်းထားတဲ့အကွက်
တွင် Operation System: Window7Ultimate 32 bit (6.1 build 7600) ဆိုပြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်။
Start> Menu> Run ဒါမှမဟုတ် Window + R ကီးကိုတွဲနှိပ်။ Run ဘောက်စ်တွင် cmd
ဆိုပြီး ရိုက်ထည့်။ ပြီးတော့ အောက်ပါစာချောင်းကို မှန်အောင်ရိုက်ထည့်ပါ။
ပြီးလျှင် Enter ခေါက်။ cmd.exe ဘောက်စ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။
အဖြေသိနိုင်ရန် အောက်ပါ ကျနော်ကွင်းထားတဲ့အကွက်ကြည့်လိုက်ပါ…
Identifier REG-SZ x84 Family6Model 15 Stepping 13
x86 ဆိုရင် 32 bit OS ဖြစ်ပါတယ်။
Intel64 ဆိုရင် 64bit “Intel” OS ဖြစ်ပါတယ်၊
AMD64 ဆိုရင် 64bit “AMD” OS ဖြစ်ပါတယ်။